Ogaden News Agency (ONA) – Hay’ada UNICEF oo Kadigtay Macaluusha Ciyaalka Itoobiya Kudhaqan.
Hay’ada UNICEF oo Kadigtay Macaluusha Ciyaalka Itoobiya Kudhaqan.
Laanta hay’ada Qaramada Midoobay uqaabilsan ciyaalka ee UNICEF ayaa sheegtay in kumanaan ciyaal ah ay kutabaalaysan yihiin wadanka Gumaysiga Itoobiya, kuwaas oo sida ay hay’adu sheegtay ubaahan gargaar dag dag ah.
Warbixin ay hay’adu soosaartay ayaa lagu sheegay in ciyaalka kudhaqan Itoobiya ay kusugan yihiin dhibaatooyin kala duwan oo ay ugu horayso macaluul baahsan oo kajirta guud ahaan wadanka Itoobiya, gaar ahaan Gobolada ay colaaduhu aafeeyeen.
Warbixinta hay’ada UNICEF kasoo baxday ayaa lagu sheegay in ay kumanaan ciyaal ah kubarakaceen gudaha wadanka Itoobiya, kuwaas oo sida warbixinta lagu xusay aan haysanin wax daryeel caafimaad ah isla markaana ay baahi uweheliso.
Sidoo kale warbixinta kasoo baxday Unicef ayaa lagu sheegay in abaaruhu ay sii kordhiyeen dhibaatada iyo dayaca ciyaalka, waxayna warbixintu xustay in guud ahaan wadanka Itoobiya ay saamayn kuyeesheen abaaro soo noqnoday oo baabi’iyay xoolihii isla markaana meesha kasaaray dalagii labeeran jiray.
Hay’ada UNICEF ayaa hay’adaha kale ee caalamiga ah iyo kuwa maxaliga ahba ka codsatay in ay gargaar dag dag ah gaadhsiiyaan ciyaalka kutabaalaysan wadanka Itoobiya, kuwaas oo hadii aan caawimaad dag dag ah lala gaadhin xaalad halis ah mudan doona.
Ma aha markii ugu horaysay ee hay’aduhu ay kagigaan macaluusha iyo dhibaatada ciyaalka, waxayna hay’aduhu qaylo dhaan isdabo joog ah wadeen sanadihii lasoo dhaafay waxayna hay’aduhu dhaleeceeyeen taliska wayaanaha iyo qaabka uu wax umaamulay.
Ugu dambayntii hay’ada Unicef ayaa soo hadal qaaday colaada udhacaysa Soomaalida iyo Oromada oo galaafatay nolosha kumanaan ciyaal ah oo badhkood si ula kac ah loo xasuuqay.